Shaqo nystartsjobb waxaad adigaaga muddo dheer ka maqnaa suuqa shaqada ku heleysaa fursad aad mar kale dib ugu soo laabatid. Cidda ku shaqaaleysiineysa waxay isla mar ahaantaas heleysaa kaalmo loogu tala galay mushaarkaaga. Shaqo markaas qofka loo billaabay waxay noqon kartaa shaqo joogto ah ama mid ku meel gaar ah oo waqti buuxa- ama waqtiga qaarkiis ah.
Shaqada Nystartjobb waxaa loogu tala galay adigaaga waqti dheer ka maqnaa suuqa shaqada ama aan weli sal dhigan suuqa shaqada. Waxaad sidoo kale u baahantahay in aad buuxisid wax ka mid ah waxyaabaha soo socda:
Waa in aad buuxisay 25 sano, 12 ka mid 15 bilood ee la soo dhaafayna aad:
ahayd shaqo la’aan, shaqadoon ahaanna nooga ag qorneyd ama aad ka qeyb qaadatay arbetsmarknadspolitiskt program
qaadaneysay sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning ama gunnada dhaq- aktivitetsersättning
degmo ka qaadaneysay försörjningsstöd ama kaalmo dhaqaale isla markaana aad ahayd bilaa shaqo.
Waa in aad buuxisay 20 sano laakin aadan buuxin 25 sano, ugu yaraan 6 bilood oo ka mid ah 9 bilood ee la soo dhaafayna aad:
qaadaneysay sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning ama aktivitetsersättning
Shaqo markaas la billaabay waxaad sidoo kale fursad u heli kartaa haddii aad buuxisay 20 sano iyo haddii aad
tahay qof dhawaan waddanka yimid oo ka qayb-qaata etableringsprogrammet
tahay qof waddanka ku cusub oo 36 bilood ee lasoo dhaafay helay degganaansho ama xubin ka ahaansho qoys dhalasho Midowga Yurub/Iskaashiga dhaqaalaha ee Yurub haysta ahaan ku helay kaar degganaasho
ka qayb qaadatid jobb- och utvecklingsgarantin
laguugu xukumay xarig, laguuna ogolaaday joogista banaanka xabsiga ama si shuruud ah laguu sii daayay laakiin aanad dhamaysan hal sano oo ka mid ah wakhtiga tijaabada.
Haddii aad buuxisay wax ka mid ah shuruudaha, aadna dooneysid in laguugu shaqaaleysiiyo shaqo markaas la billaabay waxaad sameyneysaa sidan:
Xiriirradaada ama adigoo annaga na soo maraya, ku hel shaqabixiye doonaya in uu kugu shaqaaleysiiyo shaqo-billaabid cusub.
Shaqabixiyaha ka codso in uu codsi noo soo diryo.
Nystartsjobb – marka aad shaqaaleysiineysid dad muddo dheer shaqo la’aan ahay
Marka uu codsiga shaqabixiyuhu na soo gaaryo waxaad naga heleysaa e-mail ama SMS ku aaddan sida aad ku geli kartid Mina sidor si aad uga soo jawaabtid dhawr su’aalood oo ku aaddan ka maqnaashadaada suuqa shaqada. Jawaabahaaga ayaa lagu saleynayaa go’aan ku aaddan in aad heli kartid nystartsjobb iyo in kale.
Waxaan go’aan ka gaareynaa in shaqabixiyuhu uu kugu shaqaaleysiin karyo nystartsjobb.
Waxaad xaq ku leedahay nooca mushaharka ku xusan heshiiska wadareed ee loo shaqeeyeyaasha. Haddii loo shaqeeyaha usan hoosta ka saxiixin heshiiska wadareed, waxaad xaq ku leedahay mushahar u dhigma kan ku xusan heshiiska noocaas ah.
Shaqo ku qorida oo ah nooca [nystartsjobb] waxaa daboola Sharciga sugidda shaqo ku qorida [anställningsskydd, LAS]. Haddii loo shaqeeyaha u hoosta ka saxiixay heshiiska wadareed, waxaa xaaladaas dhici karto in qaar kamid ah qodobada ku xusan Sharciga sugidda shaqo ku qorida ay meesha ka maqan yihiin.